पोस्टम्यारिज अफेयर्स, जोखिममा लभ–म्यारिज,<br> नयाँ पुस्ता र महत्वाकांक्षा
Homesamajikपोस्टम्यारिज अफेयर्स, जोखिममा लभ–म्यारिज,
नयाँ पुस्ता र महत्वाकांक्षा
पोस्टम्यारिज अफेयर्स, जोखिममा लभ–म्यारिज,
श्रीकृष्ण न्यौपाने / घटना–१ पत्नीले सधँैजसो झगडा गर्ने र राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र प्राविधिक सूचनाको सरल साधन भाइबरमा लुकी–लुकी च्याट गर्न थालेपछि कीर्तिपुरका एक युवा चिन्तित भए । तीन वर्षको छोराको आमासमेत रहेकी पत्नी अर्कै केटासँग सम्बन्धमा रहेको अड्कल काटेका उनी भित्रभित्रै पीडित थिए ।
यही प्रमाणित गर्न उनी एकदिन, आमालाई भेट्न हेटौंडा जान्छु भनेर घरबाट केही दिनका लागि निस्किए । यता, पत्नीलाई पति दुई÷चार दिन नआउने भएपछि झन् खुसी थपियो । तर, ती युवा आमा भेट्न नगई आमालाई बीचबाटोमा बोलाएर आमाकै मोबाइलबाट पत्नीलाई फोन गरे । सासूूको मोबाइलबाट फोन आएपछि पति हेटौंडा पुगेकोमा ढुक्क भइन् युवती ।
पति भने कीर्तिपुर आसपासका होटलमा बसेर पत्नीको चियोचर्चो गर्न थाले । प्रहरी महिला सेलमा समेत जानकारी गराएका पतिले पत्नी अर्कै केटासँग चोभारको एक गेस्ट हाउसमा पुगेको जानकारी पाएँ । प्रहरीले पत्नीलाई अर्कै केटासँग रंगेहात समात्यो । ३ वर्षदेखि अवैध सम्बन्धमा रमाउँदै आएकी ती युवतीलाई अन्ततः अर्कै केटासँग समातेपछि उनको शंका पुष्टि मात्र भएन उनीहरूको सम्बन्धमा नै पूर्णविराम लाग्यो । उनीहरू ‘डिभोर्स’को चरणमा पुगे । आमाबाबु छुट्टिएसँगै ३ वर्षे बालकको भविष्य अन्योलमा परेको छ । ती पुरुषस“ग ३ वर्षदेखि सम्पर्कमा रहेकी पत्नीको स्वार्थ यौन प्यास मेटाउनु मात्रै रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो । प्रहरीका अनुसार ती छोरो लिएर माइत हिँडेकी महिलामा कुनै अफशोच र पश्चात्ताप पनि थिएन ।
महोत्तरीको डाम्हीमडैंका एक युवक ३ वर्षको वैदेशिक रोजगारीपछि पत्नीसँग सुखद जीवन बिताउने सपनामा केही साताअघि घर फर्किए । आर्थिक बाध्यताले मलेसिया गएका सुरेश मुखियाकी पत्नी घर आएपछि मुस्किलले एक महिनासँगै बसिन् । विदेशबाट आएको एक महिना नबित्दै पत्नी तेतरीले पतिलाई मात्र छाडिनन् विदेशबाट कमाएर ल्याएको नगद र गरगहनासमेत लिएर अर्कै पुरुषसँग झांगिएको सम्बन्धलाई पूर्णता दिन घर छाडेर हिँडिन् । विदेशबाट पैसा कमाएर ल्याएपछि पत्नीसँगको जीवन सुखद होला भन्ने सपना देखेका सुरेशस“ग न अहिले पत्नी तेतरीसँगै छिन् न उनको श्रामको कमाइ नै !
उल्टै ससुराली पक्षले तेतरीलाई बेपत्ता पारेको भन्दै तनाव दिन थालेका छन् । विवाह भएको एक वर्षपछि परिवारलाई सुख दिने र बहिनीको विवाह गर्ने पैसा कमाउन भन्दै उनी ३ वर्षअघि मलेसिया गएका थिए । अहिले उनको बिजोग भएको छ । न बहिनीको विवाह धुमधामले गर्न सक्ने उनको आर्थिक हैसियत नै छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक महादेवस्थानमा ३ वर्षदेखि लिभिङटुगेदरमा बस्दै आएकी प्रेमिकालाई हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले २८ वर्षीय श्याम श्रेष्ठलाई पक्राउ ग¥यो । प्रेमिका हत्यापछि फरार रहेका श्रेष्ठलाई प्रहरीले दाङको लमहीबाट पक्राउ गरेको थियो । नुवाकोट रातोमाटे–१ महादेवस्थानकी १८ वर्षीया अन्जना थापाको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका श्रेष्ठ ३ वर्षदेखि उनीसँग लिभिङटुगेदरमा थिए । युवतीले विवाहको दबाब दिन थालेपछि सुरु भएको झगडा र मनमुटावमा आक्रोशित भएका श्रेष्ठले कुटपिट गरी २१ वैशाखमा युवतीको हत्या गरेका थिए । कक्षा १० मा नुवाकोटको विद्यालयमा पढ्दै गरेकी थापा र त्यही सवारी चालकका रुपमा काम गर्ने क्रममा श्रोष्ठसँग भेटघाट भएपछि उनीहरूबीच सम्बन्ध बढेको थियो । विवाहित श्रेष्ठले ढाँटेर थापालाई तीन वर्षदेखि भक्तपुरमा ल्याएर राखेका थिए । ५ वर्षको छोराका बाबुसमेत रहेका श्रोष्ठले युवतीलाई विवाह गर्ने प्रलोभन दिँदै आएको प्रहरीसमक्ष स्विकारेका थिए ।
‘खाना थालमा खानुपर्छ, पानी धारामा पिउनुपर्छ तर सेक्स जहाँ भेट्यो त्यहीँ गर्नुपर्छ’ भन्ने अमेरिकन अभिनेता स्टिभ मार्टिनको भनाइको पछि लाग्ने हो भने पूर्वीय समाजका सम्बन्ध कुनै बाँकी रहँदैनन् । पश्चिमा विकसित समाजमा सम्बन्ध पानीका फोकाजस्ता हुन सक्छन् तर एसिया प्रशान्त क्षेत्रको समाजले त्यस्तो मान्दैन । यद्यपि, यौन सम्बन्धको आधारमा रहेर धेरै सम्बन्ध भत्किएका छन् जुन कारण नेपाली समाजमा पनि लागू हुन्छ । प्रविधिले भित्राएको सहज सम्पर्क मात्र होइन, सम्बन्धका विविध आयामबारे आउन थालेका अनेक प्रकारका नयाँ खबरले नेपाल पनि आक्रान्त बन्न थालिसकेको छ ।
अहिले चर्चा छ– ‘पोस्टम्यारिज अफेयर्स’ को ।
सहरी क्षेत्रमा व्याप्त रहेको विवाहपछिको वैकल्पिक शारीरिक सम्बन्ध दूरदराजमा अभ्यास हुने क्रम पनि बाक्लिएको छ । सहरमा मात्र समस्याको विषय बनेको यस्तो घरायसी कलहको सम्बन्ध गाउँघरको पनि समस्या हो । यस्तो सम्बन्धलाई पूर्वीय सांस्कृतिक भाषामा ‘नाजायज’ अथवा ‘अवैधानिक’ सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।
घरमा पति या पत्नी हुँदाहुँदै पनि बाहिर अन्यसँग सम्बन्ध राख्नुलाई ‘पोस्ट म्यारिज’ वा ‘एक्स्ट्रा म्यारिज’ अफेयर्सका रूपमा बुझिन्छ । यही अफेयर्सको चलन बढ्दै जाँदा पारिवारिक (जायज) सम्बन्ध टाढा र अवैध सम्बन्ध नजिक हुन थालेका छन् । समाजमा विकृतिका रूपमा फैलँदै गरेका यस्ता व्यवहारले वैवाहिक सम्बन्ध मात्र तोडिएका छैनन् सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यता पनि ढल्न थालेका छन् । घरमा पति÷पत्नी हुँदाहँुदै परस्त्री वा परपुरुषस“ग सम्बन्ध जोडिँदै जाँदा पारिवारिक माया, स्नेह, विश्वास र सम्बन्धमा खोट पैदा भई रिस, असमझदारी हुँदै सम्बन्ध टुंगिन थालेका छन् ।
यसैको परिणाममा उच्च वर्गीय समाजले ‘डिभोर्स’को विकल्प रोज्ने गरेका छन् भने निम्न मध्यमवर्गीय समाजमा सामाजिक आक्षेप र कलंकसहित अपराधको चरणलाई पनि अँगाल्नुपरेका भयानक उदाहरण छन् । पति÷पत्नीको सम्बन्ध टुटेसँगै सामाजिक नातासँग जोडिएका अन्य आयाम पनि प्रभावित हुन्छन् । डबल अफेयर्सका रूपमा परिचित यस्ता सम्बन्धले परिवार र समाजमा विखण्डन मात्र गरेको छैन नाबालक सन्तानको सुखद भविष्यमा समेत असर पुगेको छ । नेपाली समाजमा पनि सञ्चारमाध्यमसम्म झन्डै सातामा तीनभन्दा बढि सूचना यस्तै घटनामा आधारित भएर आउने गरेका छन् । एक सातामा आएका सामाचारलाई आधारबिन्दु बनाएर ‘पोस्टम्यारिज अफेयर्स’बारे खोजीनीति गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
प्रस्तुत घटना विवाहपछिका सम्बन्धका रूपमा स्थापित फरक–फरक प्रतिनिधि घटना हुन् । विवाहपछि हुने गरेका यस्ता घटना सुरुमा रहर वा आकर्षण र यौन सुखका लागि हुने गरेको देखिन्छ । विस्तारै बढ्दै जाने यस्ता गोप्य सम्बन्धले परिवार, सन्तानको भविष्य, धनसम्पत्तिको नोक्सानी र मान–प्रतिष्ठामा आ“च मात्र नभई अपराधको बाटोमा पनि धकेलिन बाध्य तुल्याउँछ ।
मनोविज्ञ प्राध्यापक गंगा पाठकका अनुसार आफ्नो सम्बन्धमा खुसी हुन सक्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘एकअर्काबीच खुसी हुन नसक्दा यस्ता आपराधिक घटना बढ्न थालेका छन् । पति वा पत्नीलाई अर्काका पति पत्नीसँग तुलना गरिँदा वैवाहिक जीवन तहसनहस हुने आधार खडा हुन्छ ।’ पति÷पत्नीको सम्बन्धको बलियो आधार नै एकअर्काप्रतिको माया र विश्वास हो । सम्बन्धलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वैवाहिक सम्बन्ध कल्पना गरेजस्तो आदर्श नहुन सक्छ । एकअर्काबीच सम्मानपूर्ण र मायालु व्यवहार, पारिवारिक मेलमिलापजस्ता विषयमा असमझदारी आए दम्पती सम्बन्धमा तेस्रो व्यक्तिको उपस्थिति सहज हुने विज्ञको बुझाइ छ ।
विवाह एक पवित्र बन्धन मात्र नभई जन्मान्तरसम्म सँगै हिँड्ने एक विश्वासिलो र भरपर्दो सम्बन्धका रूपमा पूर्वीय समाजले व्याख्या गर्दै आएको छ । यही सम्बन्धमा तेस्रोलाई प्रवेश दिँदा डिभोर्ससम्म पुगेर नातासम्बन्धमा पूर्णविराम लाग्ने गर्छ । हिजोआज धेरै पति–पत्नीको वैवाहिक सम्बन्ध यस्तै कारणले धरापमा पर्दै आएको छ । वैवाहिक सम्बन्ध मजबुत हुन नसक्ने या टुट्ने कारणलाई विश्लेषण गर्दा सबै टु्टेका सम्बन्ध डबल अफेयर्सका कारण मात्र पनि होइनन् । अनि सम्बन्धविच्छेद भएका सबै सम्बन्ध दोहोरो अवैध सम्बन्धका कारण मात्र पनि होइनन् । सम्बन्धविच्छेदका अधिकांश कारण दुई जनाको सम्बन्धमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश नै हो ।
कसरी हुन्छ तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश ?
वैदेशिक रोजगारी सिलसिलामा पति विदेशमा हुने र तीव्र यौनचाहनाका कारण पत्नीहरू ‘सेक्स पार्टनर’ खोज्नतर्फ लाग्नाले सम्बन्धविच्छेद हुँदा घरपरिवार ध्वस्त भएका छन् । यसलाई पुष्टि गर्ने महोत्तरीको घटना उल्लेख गरिसकिएको छ । धनसम्पत्ति सुनचाँदी र पैसा लिएर पत्नी फरार हुनुको स्पष्ट कारण शारीरिक सम्पर्क नै मुख्य कारक भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण स्वदेशमा भएका पत्नी मात्र परपुरुषस“ग लागेका छैनन् । विदेश जाने पतिसमेत परस्त्रीसँग नजिकिएपछि पनि सम्बन्ध टुक्रिएका छन् । पति वैदेशिक रोजगारीमा गई पैसा कमाएर आएपछि बाहिरै ‘गर्लफ्रेन्ड’ बनाउने अनि कमाएको सम्पत्ति पनि गर्लफ्रेन्डकै लागि खर्च गरी विवाह गरेका उदाहरण पनि छन् । यस्तो कार्यले पत्नीलाई मानसिक यातना दिएर डिभोर्सका लागि दबाब दिनेसम्मका घटना पनि प्रहरी र अदालतमा पुगेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारका कारण पति मात्र होइन, पत्नी पनि पीडित छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण पति÷पत्नी सँगै बस्न नपाउनु, मान्छेका अरू आवश्यकताजस्तै यौनिक आवश्यकता पूरा नहुँदा आफ्नो सर्कल या चिनजानको मान्छेसँग यसै उद्देश्यले निकटता बढ्न थालेपछि सम्बन्धमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश हुन थाल्छ । कतिपय सम्बन्धमा भएका खटपटबीचको सारथिमा उभिएको तेस्रो व्यक्ति आफैं मात्र प्रवेश गर्दैन । उसलाई प्रवेश हुन आपसी सम्बन्धको तिखो असमझदारीले बाध्य बनाउने गर्छ ।
सम्बन्धमा तेस्रो व्यक्ति आगमनका लागि सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी फेसबुक सहयोगी बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालले सम्बन्धहरू जोड्ने मात्र नभई भइरहेका सम्बन्धलाई तोड्ने पनि गरेको छ । कतिपय वैवाहिक सम्बन्ध फेसबुकका कारण धरापमा मात्र परेका छैनन् अन्ततः सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुगेका छन् । अनावश्यक रूपमा फेसबुकमा अत्यधिक समय खर्चिने, घर–व्यवहार र काममा महत्व नदिने, नयाँ अपरिचित साथीसँग नजिक भई घर–व्यवहारलाई बेवास्ता गर्ने तथा फेसबुककै माध्यमबाट सम्बन्ध स्थापित गरी चलिरहेको सम्बन्धलाई तहस नहस पार्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
अधिवक्ता गोपाल निरौला भन्छन्, ‘झापाका सरोज धितालले कामको सिलसिलामा हङकङ गएको बेला उतै बसेकी पोखराकी रमा पुनलाई फेसबुकबाट चिनजान र मायाप्रीति बसाई हङकङमै विवाह गरे । पछि नेपाल फर्किएलगत्तै सरोजकी पहिलेकी पत्नी भएको थाहा पाएर रमाले तल्कालै अदालतमा गई सम्बन्धविच्छेद गरिन् ।’ सामाजिक सञ्जालकै कारण अन्य दम्पतीले पनि पारिवारिक कलह, आपसी खटपटजस्ता समस्या व्यहोरिरहेको निरौला सुनाउँछन् ।
आधुनिक समाज र विकसित मानसिकताका कारण पनि कतिपय सम्बन्धमा नयाँ व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ । आफ्नो निर्णय आफैं गर्नुपर्ने र युवा÷युवतीमा हुने उच्च महत्वाकांक्षाका कारण पनि पछिल्लो
पुस्ताका युवा÷युवतीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सकिरहेको छैन ।
आफ्ना इच्छा आकांक्षामा कोही एक बाधक महसुस गरिए स्वतन्त्रताका नाममा सम्बन्धले फरक बाटो लिने गरेको छ । अहिलेका केही युवायुवतीमा गरिएको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले सम्बन्धविच्छेदलाई हाउगुजी मान्न नहुने र भविष्यका लागि सम्बन्ध बाधक भए सम्बन्धलाई तोड्नुपर्ने तर्क राख्नेको जमात बलियो बन्दै गएको छ ।
विचारको विभेद, एक–अर्काप्रतिको अविश्वास र असन्तुष्टिले सुमधुर सम्बन्ध नहुने हँुदा पति÷पत्नी छुट्टिएकै राम्रो हुन्छ भन्नेको जमात बढेको छ । पति÷पत्नीको आ–आफ्नै पहिचान आफ्नै यथेष्ट कमाइ र बेग्लाबेग्लै सामाजिक प्रतिष्ठा हुन थालेपछि घरभित्रको सम्बन्धभन्दा बाहिरको सम्बन्धले बढी महत्व पाउँदा पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रने गरेको छ ।
आफ्नो पहिचान र अधिकारको खोजीमा लागिरहेका आजकलका बौद्धिक तथा शिक्षित दम्पतीले भने असमझदारी र असहिष्णुताको अन्तिम रूप नै सम्बन्धविच्छेद भएको बताउनुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । निरसपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुभन्दा सम्बन्धविच्छेद नै उपयुक्त हुने भन्दै आजभोलि प्रतिष्ठित व्यक्तिको सम्बन्ध टुक्रिएका समाचार सुन्नुपरेको छ ।
आफैं रोजेर विवाह गरेका जोडी आफैं सक्षम हुने भएकाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोज्ने गर्छन् । आफू जति सक्षम भयो त्यति नै आफ्नो स्वतन्त्रता चाहने भएकाले परिवारिक दबाब, हिंसा सहेर बस्न सक्दैनन् र चाहदैनन् पनि । दाम्पत्य जीवन सहज नभएमा उनीहरू सम्बन्धविच्छेद गरेर समाजमा आफ्नो छुट्टै परिचय बनाउन चाहन्छन् । जसले गर्दा विवाहपछिको सम्बन्ध कमजोर बन्दै जान्छ र अन्ततः सम्बन्धले नयाँ बाटोको खोजी गर्छ । समाजलाई खुलातन्त्रको नाममा नियन्त्रणभन्दा बाहिर नधकेल्न पनि दिगो सम्बन्धका लागि हरेकले गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । अग्रगमनका नाममा पोस्ट म्यारिज रिलेसन र डबल अफेयर्समा मान्छे अगाडि बढिरहँदा अनुशासित सभ्य समाजको मान्यता भत्किन थालेको छ । यौन र स्वतन्त्रताका नाममा सम्बन्ध टुक्रिने क्रम बढिरहने हो भने अपराध र हिंसाका घटनाले समाज आक्रान्त हुने प्रस्ट छ । यसका लागि किशोरकिशोरी अवस्थामै सम्बन्धको महत्वबारे काउन्सिलिङ आवश्यक छ ।
कस्तो बन्दै छ नयाँ कानुन ?
प्रस्तावित देवानी कानुनमा पत्नीले परपुरुषसँग वा पतिले परस्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राखे पति÷पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पतिले पत्नीसँग जबरजस्ती करणी गरे पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्ेछद गर्नसक्ने प्रावधान देवानी कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ । पतिले जाँड रक्सीको मातमा पत्नीलाई दुःख दिने र पत्नीकोे इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि जबर्जस्ती यौन सम्पर्क गर्ने गरेका घटना बाहिर धेरै आउने गरेपछि त्यस्तो प्रावधानको व्यवस्था गरिएको सांसदको भनाइ छ ।
सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी सो व्यवस्थामा पतिले पत्नीको मञ्जुरीविना पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने चार कारण उल्लेख गरिएको छ भने पत्नीका लागि सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने ६ वटा व्यवस्था प्रस्तावित छन् । पतिले तीन वर्षसम्म पत्नीसँग अलग बसेमा, पतिको अंगभंग हुने गरी कष्ट दिएमा वा जाल प्रपञ्च गरेमा तथा पत्नीले परपुरुषस“ग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले पत्नीस“ग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्नेछ ।
सोहीअनुसार पत्नीले पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष अलग बसेमा, पतिले खान लाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, शारीरिक मानसिक यातना वा जाल प्रपञ्च गरे, पतिले अर्को विवाह गरे, पतिले अन्य स्त्रीसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरे र पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरे पत्नीले पतिस“ग सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहँदा गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी सो व्यवस्थाले पति÷पत्नीबीच राजीखुसीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धविच्छेद गर्न तयार भए सोअघि अंशबन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सम्बन्धविच्छेदका लागि प्रक्रियामा गएपछि अदालतले पहिलो चरणमा दुवैबीच मेलमिलापको प्रयास गर्ने, मेलमिलाप नभए कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । 